Boa Vista Couple Suite
Indlu yethu ikulungele ukukwamkela, usapho kunye nabahlobo.
Yiza uzonwabele imimangaliso yeyadi yangasemva kunye neendawo ezisingqongileyo. Igama elithi "Boa Vista" sele lithetha yonke into malunga nombono omangalisayo wendlu yethu, sigxininisa iCachoeira da Boa Vista, iMorro Redondo kunye nemvelaphi yaseSerra do Caraça. Indawo yethu inegadi egcinwe kakuhle kunye negadi yeziqhamo, ehlala ineziqhamo ezithile zonyaka zokungcamla; igadi eziphilayo kunye nesinongo esitsha ukongeza incasa ngakumbi izitya zethu kunye namashwamshwam okumnandi.
Sibekwe kuluntu lwaseBoa Vista, uluntu olulula kwaye lwamkelekile kakhulu, kwindawo yasemaphandleni kamasipala wase-Itabira. Ukusuka kwiSithili sase-Ipoema sikumgama oziikhilomitha ezili-15. Ukushiya kwi-Senhora do Carmo kwiikhilomitha ezili-11, sisekufutshane kakhulu kwidolophana yaseSerra dos Alves, kunye ne-02 km yeendawo ezintle zomhlaba.
Uluntu lwaseBoa Vista lusondele kakhulu kwiindawo ezininzi zokhenketho kulo mmandla. Sathetha: Mata ukwenza Limoeiro State Park (10 km), Alta, Do Meio kunye Patrocinio Ingxangxasi (09 KM), Morro Redondo (10 KM), Boa Vista Ingxangxasi (01 km), Marques Ingxangxasi (03 km), Ingxangxasi ukwenza Bongue (06 KM), kunye nabathandi bokuhamba i-Luci e dos Cristais Waterfall, i-Braúnas Waterfall, i-Bandeirinhas Cannyon, phakathi kwezinye izinto ezintle. Sigxininisa ukuba malunga neekhilomitha ezili-18 sinokutyelela umasipala ongummelwane wase-Itambé do Mato Dentro kunye nedolophana ekhangayo "Cabeça de Boi", apho sinokufumana khona iingxangxasi ezininzi, imizobo yomqolomba kunye nokuhlwa kweprose kunye namabali kwiindawo zokushicilela zendawo.
Ndiyafumaneka ukukunceda kwaye ndikunike iingcebiso zokhenketho ngexesha lokuhlala kwakho. Singarenta indawo epheleleyo ukuze wena kunye neendwendwe nizonwabele. Sikwanikezela ngerenti yamagumbi ahlukeneyo kuphela, nokuba lelona gumbi lingcono labucala okanye ligumbi elinye. Ngokulungiselela kwangaphambili, sibonelela ngokutya (sibonelela ngemenyu enokukhetha kuyo) kunye nokhenketho lweendawo ezinomtsalane ozikhethileyo.
Ndiyafumaneka ukukunceda kwaye ndikunike iingcebiso zokhenketho ngexesha lokuhlala kwakho. Singarenta indawo epheleleyo ukuze wena kunye neendwendwe nizonwabele. Sikwanikezela nger…